Filan-kevi-pilaminan’ny Vondrona Afrikana – MyDago.com aime Madagascar
Filan-kevi-pilaminan’ny Vondrona Afrikana
Ilay tany Sandon ihany no fantany
Namoaka ny fehi-kevitra, na koa tatitry ny fivoriana farany natao tao Addis-Abeba ny filan-kevi-pilaminan’ny Vondrona Afrikana, ary tamin’izany no nanambarany fa tsy manao ambany maso tsy hita ny raharahan’i Madagasikara ny Vondrona Afrikana, ary dia mamporisika indrindra ny sehatra iraisampirenena iray manontolo ity CPS ity mba hijery ampitoniana ny raharahantsika, ary handinika akaiky kokoa ny ilay tondrozotra nasiam-panitsiana tany Sandon ny 11 jona 2011 teo.
Nanamarika ny filan-kevi-pilaminan’ny Vondrona Afrikana fa efa nisy ny fivoriana momba ny raharahan’i Madagasikara ny 30 jona 2011, tany an-drenivohitr’i Guinée, ka tamin’izany no nanoritsoritana fa samy hafa ny tolo-kevitra sy ny hoe fanampahan-kevitra. Samy manana ny dingana, na koa ny tanjona tamin’izao famahana ny krizin’ny malagasy izao ny fanelanelanan’ny SADC, ny an’ny Troïka, ny fivoriana an-tampony, ary ny an’ny filan-kevi-pilaminana. Samy hafa, kanefa ny tanjona dia ny hahazoana miaina ao anatin’ny fitoniana ara-politika, hirosoana any amin’ny fiifdianana sy ny lamina araky ny lalampanorenana.
Ny CPS dia mpanatanteraka sy mpitady ny fomba rehetra hampiharana ny fehi-kevitry ny fivorian’ireo filoham-pirenena ao amin’ny vondrona SADC (izay nomena andraikitra hamaha ny olana). Mila ny fanampian’ny sehatra iraisam-pirenena iray manontolo izany ny CPS amin’io andraikiny io, ka mahatonga indray ny GIC ho tsy maintsy handray ihany koa ny andraikitra tokony ho azy. Raha adika tsotsotra ny resaka dia vita tokoa ny fanelanelanana ary tsy misy dinika tokony hatao intsony, fa ny hirosoana ny fampanjariana hevitry ny filoham-pirenena nivory tany Sandton, izay lalana(tsy maintsy) izoran’ity CPS ity, ary mila ny hevitry ny GIC sy ny sehatra iraisam-pirenena izy amin’izany.
Tampina tanteraka ny daomy ho an’ny fanelanelana (Chissano, Simao, Salomao), ary tonga eto an-tampon’ny tian-kano tsy tian-kano ny mpanao politikantsika (na ny mpihazona ny fahefana, na ny sesin-tany, na ny voafidy, na ny notendrena) Rehefa tsy ny hevitra tany Sandton no hampiharin’izy rehetra ireo dia mety ho tonga hatrany amin’ny fampiasana hery ara-tafika (sanatria) ny raharahantsika. Ho tonga eto ny demokrasian’ny zera baomba, tsy maintsy hiainantsika ny an-kivy ara-toe-karena, tsy hisy hijery akory ny fifidianana kasaintsika atao. Dia iza no haniry ny hahatongavan’izany
Auteur Ony RambeloPublié le 14 juillet 2011 14 juillet 2011 Catégories Malagasy, Politique
2 réflexions sur « Filan-kevi-pilaminan’ny Vondrona Afrikana »
14 juillet 2011 à 18 h 54 min
Iza no haniry ahatongavana amin’izany?…. iza fa tsy ireo FATn’alika iro ihany!
Dia mbola ho sahy ihany ve ireo HATay ireo hanao didin’ny be sandry, izay tarihin’i astérix Norbert?
Ho hita eo indray e!
15 juillet 2011 à 6 h 10 min
Mampahery ny foza za hanohy hatrany ny mokon-doha @ zay mazava tsara ny tohin’ny tantara!!!!
Précédent Article précédent : Mitomania ry Tany Mamiko !
Suivant Article suivant : Razanamahasoa Christine